စကား စစ်ထိုးမှုများနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ချယ်ဆီး – မန်ယူ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် | ဧရာဝတီ
ဆောင်းဦးလင်း| October 29, 2012 | Hits:6,631
| | ဒိုင်လူကြီး မာ့ခ်ကလက်တန်ဘတ် ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့ အတူ ပွဲအပြီးမှာ နှစ်ဖက်အသင်း ပရိသတ်တွေကြား အငြင်းအခုံတွေ ဆူညံလို့ နေပါတယ်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> nay san thu October 30, 2012 - 6:10 am	Man U played with 12 men while Chelse are 9. I’m Man U fans but I’m feeling bad till today for the referee’s decisions.
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဘောလုံးသမား ကြယ်တပွင့် အဖြစ်ကနေ အနားယူတော့မယ် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း